Accueil > Gazetin'ny nosy > TIM-RMDM : Tsy mahazaka olona
Na inona na inona fanazavana entin’ireo mpanao politika ao anatin’ny antoko Tiako i Madagasikara (TIM) sy ny vovonana RMDM dia voaporofo ankehitriny fa tsy mahazaka vahoaka izy ireo raha mijery ny isan’ireo olona tonga teny amin’ny Magro Behoririka, ny sabotsy teo. Efa ho telo herinandro mantsy no nanomana ity famoriam-bahoaka tetsy Behoririka ity ny TIM sy ny RMDM, ary isan’andro ny fanentanana natao tany anaty haino aman-jery, saingy tsy nahafeno ny Magro akory izy ireo fa zara raha nisy olona arivo akory no namaly ny antso.
Tsiahivina fa tanjon’ny TIM sy ny RMDM tamin’io hetsika teny amin’ny Magro Behoririka io ny fanoherana ny fomba fitantanan’ny fitondrana mijoro ankehitriny, indrindra fa manoloana ny fidangan’ny vidim-piainana sy ny fitomboan’ny fahatrana eto amin’ny firenena. Nanantena ny hahazo olona betsaka ireo depiote TIM sy ry pasitera Edouard Tsarahame ary ny forongony, saingy nifanohitra tamin’izany ny zava-nisy satria na ny olona tonga teny amin’ny Magro Behoririka tamin’ny andron’ny Tetezamita aza mbola betsaka lavitra noho ny olona tonga teny an-toerana, tamin’ny sabotsy teo.
Zavatra iray tsikaritra tamin’ity hetsika famoriam-bahoaka teny amin’ny Magro Behoririka ity ihany koa ny tsy fahatongavan’ireo depiote TIM avy amin’ny Miara-manonja miaraka amin’i Fidel Razarapiera sy Hanitra Razafimanantsoa. Tamin’ny ankapobeany dia ireo mpanao politika mpikambana ao anatin’ny RMDM mpikaraman’ady no tena tazana teny an-kianja, ankaotra ireo mpiara-dia amin’ny filoha Marc Ravalomanana tsy tapaka mamonjy fivoriana eny amin’ny foiben’ny TIM eny Bel’Air. Manaporofo izany fa tsy tokony ieritreritra ny hanongana ny fitondrana Rajoelina eny an-dalambe intsony ny avy amin’ny fanoherana fa reha te hahazo fahefana izy ireo dia tsy misy afa-tsy ny fanomanana ny fifidianana amin’ny 2023.